Wakiillada Ciyaaryahan Thomas Partey oo beeniyey warka ka soo baxay Aabbaha dhalay laacibkan – Gool FM
Wakiillada Ciyaaryahan Thomas Partey oo beeniyey warka ka soo baxay Aabbaha dhalay laacibkan
Haaruun April 23, 2020
(Madrid) 23 Abril 2020. Sida wararku ay tilmaamayaan wakiillada laacibka khadka dhexe ee kooxda Atletico Madrid, Thomas Partey ayaa been abuur ku tilmaamay war ka soo baxay Aabbaha laacibkan oo uu shalay warbaahinta la wadaagay.
Aabaha dhalay ciyaaryahanka Atletico Madrid ee Thomas Partey oo lagu magacaabo Jocob Partey ayaa shaaca ka qaaday shalay in wiilkiisu uu wada-hadallo kula jiro kooxda Arsenal.
Jocob Partey oo ku sugan dalka Ghana ayaa isagoo la hadlayay barnaamijka Sports World Show ee ka baxa Idaacadda Tru FM, waxa uu ku xaqiijiyey inuu wada xaajood u socdo Arsenal iyo wiilkiisa Thomas Partey.
Waxaana uu yiri Jocob: “Waxaan wacay wiilkayga markii aan xanta maqlay, waxa uuna ii sheegay in wararka xanta ah ee Arsenal ay run yihiin.”
“Waxa uu ii sheegay in isaga iyo Arsenal ay wadahadallo u socdaan, dhammaana ay ku xirnaanayaan dalabyada ay doonayso kooxda Atletico Madrid,”
“Haddii uu Arsenal tago waa ay fiican tahay, waxay taageerayaal badan ku leeyihiin Ghana, aniguna waan ku farxi doonaa haddii uu go’aansado inuu u dhaqaaqo Arsenal.”
Si kastaba ha ahaatee, hadalkaas waxaa jawaab ka bixiyey wakiillada ciyaaryahan Thomas Partey oo lagu magacaabo JJ Sports, waxaana hadal kooban oo ay soo saareen ku sheegeen in warkaasi uusan gebi ahaanba run ahayn.
Muddooyinkii dambe waxaa jiray warar kooxda Arsenal la xiriirinayey Thomas, kaasoo qandaraaskiisa uu kula jiro Atletico Madrid lagu jabin karo adduun dhan 50 milyan oo euro.
Roberto Carlos oo ka warbixiyay sheekada tobanka daqiiqo ee u horseedday inuu ku biiro Real Madrid
Man City, Bayern Munich & PSG oo bartilmaameedsanaya xiddig ka tirsan Kooxda Juventus